Superegg Ntinye Ihe Ọkpụkpụ - Imewe Mmewe
Ntinye Ihe Ọkpụkpụ
Ntinye Ihe Ọkpụkpụ Superegg na-anọchi anya ngwangwa nke kọfị kọfị na-eji otu eji eme ihe, nke na-egosipụta ịdị mma mmadụ na mmetụta ọ na-enwe na gburugburu ebe obibi. N'ile ya anya n'elu ala, ụdị geometric superegg nke ederede, dị ka onye okute mgbakọ na mwepụ Gabriel Lame dere, nwere chaplet kọfị tụfuru n'ụzọ a na-ahụghị anya. Ahụmahụ visceral na-eme ka onye na-ekiri ya si n'akụkụ niile na tere aka. Karịrị 3000 capsules anakọtara site na oku ime ka ndị ọrụ mgbasa ozi na obodo. Superegg na-enye onye na-ekiri ya ohere ịhapụ ihe mkpofu ma gbaa ndị mmadụ ume ọhụrụ.
Aha oru ngo : Superegg, Aha ndị na-emepụta ya : Jaco Roeloffs, Aha onye ahịa : Jaco Roeloffs.
Ntinye Ihe Ọkpụkpụ Jaco Roeloffs Superegg